Jawigii Hargeysa Ee Caawa Oo Kale Iyo Gudo-galkii SNM 31 May 1988
Friday May 31, 2019 - 13:20:33 in Wararka by saleban Cilmi
Jawigii Hargeysa Ee Caawa Oo Kale Iyo Gudo-galkii SNM 31 May 1988 Jawigii Hargeysa Ee Caawa Oo Kale Iyo Gudo-galkii SNM 31 May 1988
Caawa oo kale oo ay taariikhdu tahay 31-May waxa ay ku beegantahay 31kii May,1988, taas oo ahayd habeenimadii ciidamadii Mujaahidiinta ahaa ee SNM caawa oo kale oo saq dhexe ahayd ka dhex hilaaceen gudaha Magaalda Hargaysa oo ay ku sugnaayeen ciidamadii Maxamed Siyaad Barre. Si kale haddii loo yidhaahdo waa sannad guuradii 31aad ee ka soo wareegtay gudo galkii SNM ee magaalada Hargeysa.
Magaalada Hargeysa bandoo casar dheere ah ayay dawladii Siyaad Barre ku soo rogtay. Dadka waxa ka muuqday dareen argagax leh, mana saadaalin karayn sida xaaladu u dhaci doonto. Weerarkaas ciidamada SNM ku soo qaadeen ciidamadii Maxamed Siyaad Barre waxa uu dhacay goor habeenimo oo caawa oo kale ah oo inta badan dadka reer Hargaysa hurdeen, waxaana mar kaliya lagu baraarugay dayaanka rasaasta iyo hilaaca hubka la isku ridayay ee ka baxayay Magaalada.
Ciidamadii SNM oo aanay islahayn cududooda ciidan iyo niyad wanaagoodu waxa ay si badheedh ah weerar ugu qaadeen xarumihii Fadhiisimadii ciidamada sida taliska qaybta 26-aad, gaaskii 2-aad ee Birjeex iyo guutada taangiyada,waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo fooda la isdaray.
Weerarkaas ciidamada SNM ku soo galleen gudaha Magaalada Hargeysa oo qayb ka ahaa hawlgul ciidamadii SNM ku soo galleen gudaha magaalooyinka Somaliland, waxa uu noqday habeen naanayso u baxaan qaar ka mid ah hoggaamiyayaashii sare ee Ciidamadii Maxamed Siyaad Barre, sida Taliyihii Qaybta 26aad ee ciidamadii Soomaaliya Gen. Maxamed Siciid Xirsi (Moorgan) oo loogu magac daray Cabdi Bile oo ahaa orodyahan Soomaaliyeed oo caan ahaa, taas oo macnaheedu ahaa in Gen. Morgan cagaha wax ka dayay cabsi darteed, isaga oo haleeli waayay inuu kaxaysto baabuurtiisii faraha badnayd ee hogganayay hareerihiisa, waxaana habeenkaas xabadii u horaysay ku riday taliska Qaybta Gaadhi uu saarnaa Qori” Grand B” ah, oo uu waday Mujaahid la odhan jiray Caqaar.
Intii aanay SNM soo gelin gudaha magaalada Hargeysa shan maalmood ka hor, waxa ay Hargeysa u soo direen koox sahan ah oo tiradoodu ahayd 18 xubnood, waxaana sahankaas watay Mujaahid Gacmo-dheere, Alle haw naxariiste, waxaanay 18-kaas Mujaahid ka hawl galleen gudaha iyo daafaha magaalada Hargeysa iyaga oo ku sugnaa tan iyo maalintaas 31 May ee ay SNM soo gashay gudaha Hargeysa.
Ciidamada SNM ee Hargeysa soo galay waxa ay tiradoodu ahayd mid aad u yar marka la garab dhigo kuwii Siyaad Barre. Waxay ahaayeen naftood hurayaal doonayey in ay u badheedhaan cudud ka mid ah ciidammadii ugu xooga badnaa Afrika. Ciidamadaas SNM ee Hargeysa soo galay waxa ka mid ahaa rag dhallinyaro ah oo u talaabay ka qayb galka halgankii SNM, ka dib markii ay u adkaysan waayay dulmigii iyo dhibaatadii dawladii Siyaad Barre ku haysay shacabkoodii..
Habeenkaas iyo sidii wax u dhaceen waxa Geeska Afrika uga sheekeeyay Mujaahid Xasan Maxamed Ubaxle (Xasan Ganey) oo ahaa taliyihii gaadiidkii habeenkaas Hargeysa soo galayay kana mid ahaa dhallinyaradii Mujaahidiintii ahaa ee magaca weyn ku lahaa halgankii ururkii SNM kula jiray dawladii Maxamed Siyaad Barre. Waxaanu ku bilaabay hadalkiisa, "Saddex kun (3000) oo askari ayaanu ahayn oo waxaanu ku talo galnay in dhamaantayo aanu midh naga soo noqon, laakin dadka mustaqbalka leh ay la wareegaan aayahooda aanu dhex keenay, kaas ayuu ahaa go’aan-kaygu. Markii uu go’aanki sidaas noqday waa loo diyaar garoobay maanu hayn rasaas, shidaal iyo wax kasta oo aadami ku dagaal galo. Itoobiya way naga xidhatay, waxaanu go’aankeedu ahaa ka soo guura halka aad joogtaan 15km oo qaarna Xarshin ha yimaadaan qaarna Gaashaamo. Si dublumaasiyadeed ayaanu ula dhaqanay oo kamaanan hor iman ilaa intii aanu hawlahayga abaabulanaynay si aan la iskugu dhicin ayaanu kala meer meernay. Go’aankii ugu danbeeyey markaanu gaadhnay ayaanu rasaas iyo shidaal weynay oo ciidankii beri halkooda ayaa la iskugu geeyey kuwii galbeedna dhankooda ayaa la iskugu geeyey, wax aanu ku dhaqaaqno ayaanu weynay mar labaad. Go’aankii ugu danbeeyey wuxuu noqday in nin waliba wixii uu markaas hayey uu ku dagaal galo.
Markaas anigu waxaan ahaa taliye ciidan oo masuul ka ah gaadiidkii dagaal xiligaas Hargeysa soo galaayey. Gaadhi kasta rasaasta ku jirtay waxayd ahayd laba boqol ilaa saddex boqol oo xabadood, gawaadhi waxaas xamilaayey may ahayn oo rasaasta way shubaayeen. Anigu Xassan ahaan waxaan watay lixdan midh oo kaliya, waxaanan ahaa ninka ugu rasaasta badan. Shiidaalna haba sheegin labaatan labaatan ayaanu kaga soo shubnay Bali-Samatar waxaana naga go’naa inay Hargeysa ku wada goostaan, kumaanan tala galin inuu gaadhi iyo bili’aadan midna noo soo noqdo ee waxaanu ku talo talnay in aanu Hargeysa ku wada qaraxno dhammaantayo.
Ciidankii barriga oo uu watay Axmed Mire ayaa naga hor galay, saddexda cisho waxaanu kaga danbaynay shiidaal la’aan. Dhinaca barriga waxaa laga heli jiray shiidaal laga iibsan jiray degmooyinka, anaga dhankaygu cidhiidhi ayey ahayd. Meesha la yidhaahdo Bali-samatar ayaanu isku uruursanay muddo laba habeen. 30-May oo maanta oo kale ah ayaanu ka soo dhaqaaqnay oo ay saacadu ku beegnayd 12-kii duhurnimo aniga oo xasuusta in aanu jirin markii aan soo dhaqaaqnay qof iga farxad badnaa, waxaanu u wada haysanay dhamaantayo in janadii naloogu wada bushaareeyey, waxaasina wax kale may ahayne waxay ahayd dhibka dadkayaga haystay ee ah inay gunimo ku dhacayaan. Gunimadaas ayaanu ka dooranay inay gob noqdaan dadkayagu xaga ilaahay iyo xaga bini’aadamkaba.
Kun iyo shantii boqol ee aanu ahayn waxay wateen 100 gaadhi, iyada oo tiknikada aanu wadanay aanay tayo badan lahayn, waxaanay dhamaayeen lix gaadhi oo kaliya aniga ayaana masuul ka ahaa, waxaase tiro badanaa gawaadhida kale ee ay shicibku lahaayeen. Socdaal dheer ka dib lixdii makhribnimo waxaanu soo dul istaagnay halkan masalaha oo sheekh Cumar guudkiise sare ah oo qiyaastii 5km inay u jirto aan jeclahay. Halkaas ayey jidgooyo noo dhigeen ay nagu xidhayaan. Jid gooyadaas ay noo dhigeen awgeed ciidankii wuu naga kala biiq biiqay, taasina waxay nagu qaadatay ilaa 12-kii habeenimo. Kaaga darene 12-kii habeenimo dhan kasta way naga soo xidheen oo meel noo banaanayd oo aan garanayaa may jirin, meel laga noqon karaayeyna sawirkeeduba muu muuqan. Iyaga oo sidii u fadhiya ayaanu 12-kii habeeno ka soo dhex maaxanay oo buur sheekh Cumar guudkeeda ah ayaanu soo fuulnay xataa gaadiidkayagi. Ninkii Sheekh Cumar la odhan jiray wuxuu aha nin awliyo ah askari ilaahay ah, waayo wadooyin banaan oo uu baneeyey ayaanu ka soo dhaadhacnay
…..La soco cadadka dambe